Waa maxay Platform Maareynta Hanti Dijital ah (DAM)? | Martech Zone
Maareynta hantida dijitaalka ah (DAM) waxay ka kooban tahay hawlaha maaraynta iyo go'aamada ku xeeran gelinta, sharraxaadda, buug-ururinta, kaydinta, soo celinta, iyo qaybinta hantida dhijitaalka ah. Sawirada dhijitaalka ah, animations, fiidyowyo, iyo muusig ayaa tusaale u ah meelaha la beegsanayo maaraynta hantida warbaahinta (qayb ka mid ah DAM).
Waa maxay Maareynta Hantida Dijital ah?
Maamulka hantida dhijitaalka ah DAM waa dhaqanka maamulka, abaabulka, iyo qaybinta faylasha warbaahinta. Software-ka DAM waxa uu u sahlayaa sumadaha si ay u horumariyaan maktabad sawiro, fiidyow, garaafyo, PDFs, moodallo, iyo waxyaabo kale oo dhijitaal ah oo la raadin karo oo diyaar u ah in la geeyo.
Way adagtahay in kiiska loo sameeyo maaraynta hantida dijitaalka ah iyadoon u muuqan si hagar la’aan ah u sheegida waxa muuqda. Tusaale ahaan: suuqgeynta maanta waxay kuxirantahay warbaahinta dhijitaalka ah. Waqtiguna waa lacag. Marka suuqleyda waa inay kubixiyaan inta badan waqtigooda warbaahinta dhijitaalka ah intii macquul ah hawlo badan oo wax soo saar leh, faa'iido leh iyo inay yareeyaan dib u dhigista iyo nadaafadda guriga oo aan loo baahnayn.
Waxyaalahaas waxaan ku ogaanay caqli ahaan. Markaa waa wax lala yaabo in, muddadii yarayd ee aan ku hawlanaa ka sheekeynta sheekada DAM, aan arkay koror joogto ah oo dardar leh oo ku saabsan wacyiga ururada ee DAM. Taasi waa in la yiraahdo, illaa iyo dhowaan, ururradan wax fikrad ah kama haysan waxa ka maqnaa.
Ka dib oo dhan, shirkaddu waxay caadi ahaan bilawdaa inay ka soo iibsadaan software-ka DAM markay ogaadaan in, marka hore, ay leedahay wax badan (akhri "mugga aan la maarayn karin") ee hantida dhijitaalka ah iyo in, labaad, la tacaalida maktabadda hantida dhijitaalka ah ee weyn ayaa iyana aad u fog qaadata. waqti badan oo aan la siin faa'iido ku filan. Tani waxay run ka ahayd warshado badan oo ay ku jiraan waxbarashada sare, xayaysiinta, wax soo saarka, madadaalada, aan faa'iido doonka ahayn, daryeelka caafimaadka, iyo tignoolajiyada caafimaadka.
Dulmarka Platform Maareynta Hanti Dijital ah ee Widen
Tani waa halka ay DAM ka timaaddo. Nidaamyada 'DAM' waxay ku yimaadaan qaabab iyo cabbirro fara badan, laakiin dhammaantood waxay u dhisan yihiin inay sameeyaan ugu yaraan wax yar: bartamaha kaydinta, abaabulka iyo qaybinta hantida dijitaalka ah. Marka maxaad u baahan tahay inaad ogaato si aad u hagto raadinta iibiyahaaga?
Qaababka Gaarsiinta DAM
Balaadhi dhawaan sii daayay warqad cad oo wanaagsan oo sharraxaysa kala soocida (iyo isku dhufashada) dhexdooda SaaS vs. Hosted vs. Hybrid vs. Open Source xalalka DAM. Tani waa kheyraad wanaagsan oo lagu hubinayo haddii aad bilaabayso inaad sahamiso doorashooyinkaaga DAM.
Waxa ugu muhiimsan ee la ogaado, si kastaba ha noqotee, waa in mid kasta oo ka mid ah saddexdaas eray ay tahay hab lagu qeexo DAM (ama software kasta, arrintaas) iyadoo loo eegayo shuruudo kala duwan. Maahan kuwo si gaar ah u kala-go'an-in kasta oo ficil ahaan aysan jirin wax iskudhaf ah oo u dhexeeya SaaS iyo xalalka rakibay.
SaaS DAM nidaamyadu waxay bixiyaan dabacsanaan marka la eego socodka shaqada iyo helitaanka kharashyada ugu yar ee IT-ga. Software-ka iyo hantidaada waxaa lagu martigaliyay daruuraha (taasi waa, serverka fog). In kasta oo iibiye sumcad leh oo loo yaqaan 'DAM' uu adeegsan doono habka martigelinta ee aadka u sugan, hay'adaha qaarkood waxay leeyihiin siyaasado u diidaya inay u oggolaadaan macluumaad xasaasi ah oo ka baxsan xarumahooda. Haddii aad tahay hay'ad sirdoon oo dowladeed, tusaale ahaan, malaha inaadan sameyn karin SaaS DAM.
Barnaamijyada rakibay, dhanka kale, dhammaantood waa "gudaha". Shaqada ururkaagu wuxuu u baahan karaa nooca xakamaynta warbaahinta oo ka imaan karta oo keliya ilaalinta xogta iyo server-yada ku jira dhismahaaga. Xitaa markaa, waa inaad ka feejignaataa xaqiiqda ah, illaa aad ka taageerto xogtaada kumbuyuutarrada fog, habdhaqankani wuxuu kuu daayaa inaad halis u tahay dhacdo dhacdo ka tagi doonta hantidaada gebi ahaanba aan la soo celin karin. Taasi waxay noqon kartaa musuqmaasuq xog, laakiin waxay kaloo noqon kartaa xatooyo, masiibooyin dabiici ah ama shilal.
Ugu dambeyntii, waxaa jira ilo furan. Ereygan waxaa loola jeedaa nambarka ama dhismaha softiweerka laftiisa, laakiin maahan in softiweerku laga heli karo meel fog ama mashiinno gudaha ah. Waa inaadan ku dhicin dabinka ku saleysan go’aankaaga in isha furan ay kugu habboon tahay adiga haddii xalka la martigelinayo ama la rakibay. Sidoo kale, waa inaad xusuusnaataa xaqiiqda ah in softiweerku yahay il-furan ay kaliya wax ku kordhineyso haddii adiga ama qof kale aad haysato ilo aad uga faa'iideysan karto u-shaqeynta barnaamijka.
Tilmaamaha Maamulka Hantida Dijitaalka ah
Sida haddii noocyada kala duwan ee moodooyinka gaarsiintu aysan ku filneyn, waxaa sidoo kale jira noocyo badan oo muuqaal ah oo halkaas ka jira. Qaar ka mid ah iibiyeyaasha DAM ayaa ka fiican kuwa kale si ay u hubiyaan inay yihiin kuwa ugu habboon si ay u daboolaan baahiyahaaga gaarka ah ka hor inta aysan isku dayin inay ku iibiyaan nidaamkooda, sidaas darteed waxaa muhiim ah inaad gasho ugaarsiga DAM-gaaga oo leh sida faahfaahsan liiska shuruudaha intii suurtogal ah.
Mid ka mid ah horumarka muhiimka ah ee tignoolajiyada DAM waa awooddooda ay ku dhexgalaan dhammaan tafatirka iyo daabacaadda waaweyn ee aaladaha - qaar badan oo leh socodka oggolaanshaha dhammaystiran ee socodka. Taasi waxay la macno tahay in naqshadeeyahaagu uu naqshadayn karo garaaf, ka heli karo jawaab celin kooxda, samayn karo tafatir, oo si toos ah ugu riixi karo sawirka la hagaajiyay nidaamkaaga maaraynta macluumaadka.
Xitaa ka sii wanagsan: u kala qaybi baahiyahaaga qaybo ay tahay in la haysto iyo kuwo wanaagsan oo aad yeelan karto. Waa inaad sidoo kale qortaa sifooyin kasta oo lagama maarmaan ah sababtoo ah xeerar kasta, sharciyo, ama xeerar kale oo xukuma suuqaaga ama warshadahaaga.
Waxa waxaas oo dhami ay hubinayaan in aadan ku dhamaanayn astaamo aad u yar oo aanad awoodin inaad hagaajiso hufnaanta socodka shaqadaada sida ugu badan ee suurtogalka ah ama sifooyin badan oo aad isku aragto inaad bixiso gambaleelka iyo foorida aanad waligaa u baahnayn. ama aad rabto in aad isticmaasho.
Faa'iidooyinka Platform Maareynta Hanti Dijital ah
Ka fikirida waxtarka hirgelinta a nidaamka maareynta hantida dijitaalka ah marka la eego goynta kharashka or waqtiga badbaadinta kuma filna. Ma gasho qalbiga sida DAM ay u saameyn karto ururkaaga iyo agabkaaga.
Halkii, ka fikir DAM marka la eego dib u soo celin. Waxaan u isticmaalnaa ereyga si aan u tixraacno habka DAM software u suurtageliyo oo u hagaajiyo dib-u-celinta hantida dhijitaalka ah ee shakhsi ahaaneed, laakiin (marka si sax ah loo isticmaalo) waxay yeelan kartaa saameyn isku mid ah shaqada, dollarka, iyo kartida.
Qaado naqshadeeye. Isaga ama iyada ayaa laga yaabaa inay hadda ku qaataan 10 ka mid ah 40kii saacadoodba raadinta hantida aan loo baahnayn, hawlaha xakamaynta nooca, iyo ilaalinta sawirka maktabadda. Dejinta DAM iyo baabi'inta baahida dhammaan taasi macnaheedu maaha inaad jarto saacadaha naqshadeeyahaaga. Waxa ay ka dhigan tahay in saacadaha aan waxtarka lahayn, shaqada aan faa'iido doonka ahayn hadda la isticmaali karo jimicsiga xoogga male-awaalka naqshadeeyaha: naqshadeynta. Waxa la mid ah kuwa wax iibinaya, kooxda suuqgeynta, iwm.
Quruxda 'DAM' maahan inay badaleyso istiraatiijiyaddaada ama ay ka dhigeyso shaqadaada mid wanaagsan. Taasi waa inay kugu sii deyneyso inaad raacdo isla istiraatiijiyaddan si ka sii daran oo ka dhigaysa shaqadaada mid diirada saareysa waqti badan.
Widen ayaa daabacday garaafkan qoto dheer ee kugu dhex socda kiiska ganacsiga ee maalgashiga lagu samaynayo madal Maareynta Hanti Dijital ah.
Tags: hanti abuuristaqaybinta hantidamaaraynta hantidahagaajinta hantidaqorsheynta hantidailaalinta hantidafaa'iidooyinka biyo xidheenkaContent Suuqxidheenkabiyo xireenka infographicmaaraynta hantida dijitaalka ahmadal maamulka hantida digitalEmail Marketinginfographicmaaraynta hantida warbaahintawaa maxay biyo-xidheenwaa maxay madal maaraynta hantida dhijitaalka ahfidinbalaadhinta hantida